Riyaale kumuu ahaa ? shakhsiyada Nabad jecel iyo Cadaalad !!!!! | Berberatoday.com
Riyaale kumuu ahaa ? shakhsiyada Nabad jecel iyo Cadaalad !!!!!
Waxa uu ku dhashay Deegaanka la yidhaahdo Qun-ujeed oo woqooyi ka xiga Magaalada Boorama sannadkii 1952.
Sannadkii 1975 waxa uu ku biiray Ciidankii Nabad sugida ee NSS Sannadkii .
Daahir Rayaale Kaahin waxa uu ka gaadhay darajadda ciidanka Gaashaanle Sare ee ciidankii Nabadsugidda ee Dawladdii kaliga Taliska ahayd wuxuu intii u dhexeysay 1975 ilaa 1991 burburkii dawladdii Soomaaliya ka soo shaqeeyay meelo ay ka mid ahaayeen Hargeysa, Berbera, Laascaanood, Burco iyo safaaradda Somaaliya ee Jabuuti.
Kadib markii ay dhacday, Dawladii kaligii
Taliska ahayd ee u hor boodi jiray Siyaad Bare, Daahir Riyaale wuxuu ka qayb-qaatay
Dhismaha Somaliland 18 may ee Magalada Burco ee Gobalka Togdheer.
Bishii 23-kii February, 1997dii shirweynihii Beelaha Somaliland ee Magaalada Hargeysa Ayaa Daahir Riyaale lugu dooratay inuu noqdo Madaxweyne ku xigeeen.
3-dii May 2002, markii Madaxweynihii Somaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal uu ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla dalka Koonfur Afrika ayaa saacado yar kadib loo dhaariyay Daahir Rayaale Kaahin Madaxweynaha Somaliland sida uu dhigaayay dastuurka Somaliland.
Waxa uu ku guulaystay Doorashooyinka Madaxtinimo ee Somaliland bishii abriil ee Sanadkii 2003dii, isaga oo ka sharaxna Xisbiga talada haya ee UDUB (Ururka dimuqraadiga ee Umadaha bahoobay),
Daahir Rayaale Kaahin oo kaga guuleystay 80 cod oo keli ah musharraxii Xisbiga mucaaridka ah ee Kulmiye, Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, iyadoo tartankana uu ku jireen lix xisbi oo kale .
waxana xilka loo dhaariyay bishii may ee 2003dii.
Kadib sideed sano uu Dalka xukumayay Sanaddii 2010 bishii 26 june Doorashadii Madaxweynaha waxa kaga adkaaday Mudane Axmed Maxamed Maxmuud Siilaanyo oo ka sharaxnaa xisbiga Kulmiye oo helay ka badan 49%.
Riyaale si geesinimo ku jirto ayuu u qiratay in lagaga adkaaday Doorashada mudo bil kadib ahna waxa uu xilka ku wareejiyay Madaxweynihii cusbaaa.
Madaxweyne Riyaale waxa uu aha nin aan xil jeclayn, daaacad ah jacelna markasta wada jirka dadkiisa.
Rayaale , wuxuu ku sifoobay cadaalad iyo Shaqo daacadnimo ah, waxa la isku raacay inaanu ahayn nin xukun jecel, taasina waxaa Cadayn u noqotay Sidii doorshanyoonikii Barlamanka iyo Madaxweynaha markii Xisbiigiisa looga adkaaday uu u ogalaaday.